Andekaleka : Ny eo vita, ny eo may indray
mercredi, 26 janvier 2022 19:08
Mitohy hatrany ny ezaka ataon'ireo teknisianina eo anivon'ny Jirama manamboatra ilay Transfo lehibe nipoaka ka may tamin'ny 02 janoary lasa iny. Nosoloina tanteraka iny satria dia tsy nisy azo noraisina.
Natao ny andrana omaly talata 25 janoary, nizotra araka ny tokony ho izy nandritra ny 6ora, fa nisy Transfo hafa indray may ka dia manamboatra indray, ka ny faran'ity herinandro ity no anaovana andrana vaovao.
Efa misy moa ireo fitaovana vaovao nafarana, fa eo ampikarakarana azy, ireo teknisianina hifanaraka amin'ireo fitaovana efa antitra.
Miezaka hatrany moa ny minisitry ny Angovo sy ny akoran'afo, Ramaroson Andry mankahery ireo mpiasa, satria dia maro amin'izy ireo ihany koa no tratran'ny tsy fahasalamana, na dia misy toeram-pitsaboana manokana aza any an-toerana.
Ny famokarana herinaratra ao Antelomita moa dia mandeha tsy misy atahorana, raha somary nidina kely izy noho ny fiakaran'ny rano be loatra mitondra fako sy fasika marobe teo.